ထိပ်တန်း 25 ဂိမ်းများကို 2017 | Androidsis
ထိပ်တန်း 25 ဂိမ်းများကို 2017
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Android ဂိမ်းများ, NOTICIAS
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၏နောက်ဆုံးလတွင်အပြည့်အဝနှစ်မြှုပ်ခြင်းသည်ထင်ရှားသောအရာများကိုပြန်ကြည့်ရှုရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်တော့မယ် ဒီနှစ်အဆုံးသတ်ဖို့လာမယ့်သောယခုနှစ်အတွင်းအရေးအပါဆုံးခဲ့ကြသောဂိမ်းများ။ ငါတို့သိသည့်အတိုင်းဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်ရရှိနိုင်သည့်ဂိမ်းများကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရနိုင်သည်။
areasရိယာအားလုံးမှဂိမ်းများကိုထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားခဲ့သည်။ အားကစား၊ လူကြိုက်များ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှု၊ လူမှုရေး၊ သငျသညျဂိမ်းရှာဖွေနေအချိန်တွေအများကြီးမဖြုန်းတီးပါက။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံသင်ကိုယ်တိုင်အာရုံပျံ့လွင့်စေမည့်အရာတစ်ခုခုကိုသင်လက်လွတ်သည် ဒီနေရာမှာမင်းကိုယုံကြည်လာစေမယ့်အရာတစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်.
1 ဒီနေရာမှာ 25 ခုနှစ်တွင်အများဆုံးထွက်ရပ်ကြပြီ 2017 ဂိမ်းအချို့ရှိပါသည်
1.2 ဉာဏ်စမ်းပဟေ:ိ: လိုဂိုဂိမ်း
1.3 Pokemon Go ကို
1.4 စူပါမာရီယို Run ကို
1.5 Sonic အင်အားစုများ: Speed ​​Battle
1.7 တောင်တက်တောင်တက်ပြိုင်ပွဲ 2
1.8 Angry Birds ဂိမ်း 2
1.9 Royale ထိပ်တိုက်တွေ့
1.10 တိရိစ္ဆာန် Crossing
1.12 ကြောင်: Crash Arena Turbo Stars
1.13 အပင် vs ဖုတ်ကောင် 2
1.15 BMX တန့်
1.16 Rally Rally 2
1.17 Assassin ရဲ့ Creed Identity
1.18 Dino ကို T-Rex
1.19 ဂန္ထဝင် solitaire
1.20 WWE 2K
1.21 အသက် ၂ နှစ်မှ ၅ နှစ်ကြားကလေးများအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်းများ
1.24 လယ်သမား smulator
1.25 Great Theft Auto: ဒုစီးတီး
2 ၂၀၁၇ အတွက်ရွေးချယ်ထားသောဂိမ်းအမျိုးအစားများကိုမင်းစဉ်းစားမိပါသလား။
ဒီနေရာမှာ 25 ခုနှစ်တွင်အများဆုံးထွက်ရပ်ကြပြီ 2017 ဂိမ်းအချို့ရှိပါသည်
တစ် သင်တွေ့ရမည့်အခြေခံအကျဆုံးဂိမ်းများထဲက Play Store တွင်ရှိသည်။ ဒြပ်စင်နှစ်ခု - ဘောလုံးနှင့် U။ လိုင်းများနှင့်ပုံစံများကိုဆွဲ ဘောလုံးကိုအဆုံးသတ်အောင်လုပ်ပေးရပါမယ်။။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသည်၎င်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကအားတာဝန်ရှိသည်။ ၎င်း၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်လွယ်ကူသော။ သို့သော်အချို့သောဖန်သားပြင်များသည်သင့်ကိုသေတ္တာများထဲမှထုတ်ယူနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။ သငျသညျကစားခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းချက်စဉ်းစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ရေးသားသူ: IDC ဂိမ်းများ
တစ်ခုလုံးဂန္။ လူအများစုအတွက်၎င်းသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းနိုင်သည်။ သို့သော်ယနေ့ပင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအရေးအပါဆုံးကုမ္ပဏီများ၏အမှတ်တံဆိပ်များအားလုံးသိသည်ဟုယုံကြည်သောသုံးစွဲသူများကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေသည်။ နာမည်ကြီးလိုဂိုတစ်ခု၏အမှတ်တံဆိပ်သည်မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်ကိုခန့်မှန်းရန်လိုသည်, ဒါပေမယ့်အက္ခရာများမရှိဘဲသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖျက်။ အစောပိုင်းချိတ်နှင့်လည်းအလားတူလမ်းအတွက်စိတ်ပျက်ရ။ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ပါ။
ရေးသားသူ: အလုပ်မှာ Lemmings
Pokemon Go ကို
ဂိမ်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအလွန်အောင်မြင်မှုနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ သူတို့၏အရေအတွက်ကျဆင်းသွားသော်လည်း ဒီနွေရာသီမှာလစဉ်သုံးစွဲသူ ၆၅ သန်းကျော်ရှိနေတုန်းပဲ။ ထိုကဲ့သို့သောသုံးစွဲသူအဆင့်သည်စမတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းများအကြောင်းပြောဆိုသည့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဖော်ပြထားသည်။ Pokemon သွားပါ မိုဘိုင်းဖုန်းဂိမ်းလောကတွင်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲသူကမျှော်လင့်ချက်မြင့်မားစွာထုတ်ပေးနေသောအသစ်အဆန်းများစတင်ရန်ပြင်ဆင်သည်။
စူပါမာရီယို Run ကို
iOS သုံးစွဲသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည် Android သုံးစွဲသူများအတွက်သုံးလကြာနှောင့်နှေးမှုဖြင့်တင်ပြခဲ့သည်။ မတ်လကတည်းက Super Mario Run သည် Android operating system တွင်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိခဲ့သည်။ အရာအတွက်တစ် ဦး ကအခြေခံဂိမ်း စူပါမာရီယိုသည်အမြန်နှုန်းဖြင့်မျက်နှာပြင်မှမျက်နှာပြင်သို့ပြေးသည်။ သင်လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့်ကိုင်တွယ်နိုင်သောပထမဆုံးစူပါမာရီယို။
Sonic အင်အားစုများ: Speed ​​Battle
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စမတ်ဖုန်းများ၌ထင်ရှားသော Sega ပုံအတွက်နေရာလွတ်ရှိနေသေးသည်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းသမိုင်းတွင်အလျင်မြန်ဆုံးစောင်ကောင်ပြန်လာပြီ ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုလူတို့နှင့် online ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးလာမည့်လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံပါ။ ချဉ်းကပ်လမ်းများ, ပလက်ဖောင်းများ, မီး။ Sonic, အားလုံးထွက်သွား, သင်ကသူနှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်နိုင်သလဲ
Sonic တပ်ဖွဲ့များ - အပြေးတိုက်ပွဲ
၎င်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမည်သည့်ဂိမ်းများကိုမျှစုဆောင်းခြင်းတွင်ပျောက်ဆုံးနေသည်မဟုတ်ပါ။ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်အချိုမြဆုံးဂိမ်း နောက်လိုက်များစုဆောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ သကြားလုံးများနှင့်သကြားလုံးများအကြားအားလပ်ချိန်၌ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆက်လက်ပျော်မွေ့နေသည့်သုံးစွဲသူများစွာရှိနေသေးသည်။ ငြီးငွေ့မှုအတွက်အမြဲတမ်းအားကိုးနိုင်သောဂိမ်းတစ်ခု။
«အတွက်ဂိမ်းသင်၏ကားနှင့်အတူတောင်များ»တက်ပါ ကပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သငျသညျသစ်ကိုယာဉ်များသော့ဖွင့်နိုင်ပါလိမ့်မည် ယခုတွင်သင်သည်သင်၏ကားကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ပြီ။ သင်၏ကားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ညှိရန်ရွေးချယ်စရာများပင်ရှိသည်။ ပြိုင်ဘက်များနှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့်မှတ်တမ်းများအားလုံးကိုချိုးဖောက်ပြီးချိုးဖျက်နိုင်သည်။ သင်၏လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်သင်၏အောင်မြင်မှုများကိုမျှဝေပါ။
Angry Birds ဂိမ်း 2
ဒေါသထွက်နေသောငှက်များသည် ဆက်လက်၍ စစ်ဆင်နွှဲနေကြသည်။ ဗားရှင်းနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများစွာသည်ဤဂိမ်းကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်အမြဲတမ်းရှိနေခဲ့သည်။ ပလက်ဖောင်းအသစ်များ၊ ငှက်မျိုးစိတ်အသစ်များနှင့်တူညီသောမျောပါခြင်းများ။ အားသွင်း, ရည်ရွယ် ... နှင့်ရိုက်ကူး။ ဘယ်အဆင့်အထိရောက်နိုင်မလဲ။
Clash of Clans ၏မိဘများ၏ဖန်တီးမှု။ ကဒ်ပြားများ၊ စာလုံးပေါင်းများနှင့်ကာကွယ်ရေးမျိုးစုံကိုစုဆောင်း။ အဆင့်မြှင့်တင်ပါ။ ရန်သူမျှော်စင်များကိုဖျက်ဆီး။ ဆုဖလားများကိုအနိုင်ရပြီးအောင်မြင်မှုကိုရယူပါ။ သင်၏စစ်တပ်ကိုတည်ဆောက်ပြီးတိုးတက်သောစစ်ပွဲအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖန်တီးပါ။ command ကိုယူရန်အကောင်းဆုံးစစ်မဟာဗျူဟာကိုသုံးပါ။
သဘာ ၀ အလယ်ပိုင်းရှိစခန်းချခရီးစဉ်ကိုအရာများစွာအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မြို့၏နေ့စဉ်ပြproblemsနာများကိုမမေ့ပါနှင့်။ သင်၏အလုပ်သစ်သည်စခန်းချနေရာကိုစီမံခန့်ခွဲလိမ့်မည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်တပ်ဆင်မှုများကိုဖန်တီးပြီးဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ နေ့စဉ်မရေမတွက်နိုင်သောပြproblemsနာများနှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုအသစ်တစ်ခု။ အခြား Campers ကိုဖိတ်ခေါ်ပါ။
တိရိစ္ဆာန် Crossing: Pocket စခန်း
FIFA မိုဘိုင်းသည်၎င်း၏ထုတ်လုပ်သူများအဆိုအရကျွန်ုပ်တို့ကိုယူဆောင်လာသည် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဘောလုံးဂိမ်း။ သင်၏လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးပြီးသင့်ကစားသမားများကိုကြယ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲပါ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမျှော်မှန်းထားသည့်အကောင်းဆုံးဂိမ်းတစ်ခုမှာဘောလုံးကို၎င်း၏အသန့်ရှင်းဆုံးပုံစံဖြင့်ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အသင်းကိုဖန်တီးပါ၊ သင့်ဆန္ဒအားလုံးနှင့်အတူလေ့ကျင့်ပါ၊ ခေါင်းစဉ်အားလုံးကိုအနိုင်ယူရန်အသင်းတစ်သင်းတွင်ပါဝင်ပါ လက်ချောင်းထိပ်မှာ
ကြောင်: Crash Arena Turbo Stars
မှအစိတ်အပိုင်းများကိုစုဆောင်းပါ သင့်ရဲ့စစ်စက်ကိုတည်ဆောက်။ အစဉ်အဆက်အားဖြင့်သိသမျှအရှိဆုံးစက်ရုပ်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ဘုန်းအသရေရောက်ရှိ။ အခြားသူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဂိုဏ်းတစ်ခုဖန်တီးပါ။ အသစ်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အသစ်သောလက်နက်များရယူပါ။ သင့်စက်ရုပ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးအခြားသူများကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်လာသည်။ သင်ဟာဂိမ်းကောင်းတစ်ခုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့သာသင်ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ် Google Play Store မှာအကောင်းဆုံးဂိမ်းလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။
အပင် vs ဖုတ်ကောင် 2
ဒါဟာအခြားဂိမ်းထိပ်တန်း၏ဂန္ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ဖုတ်ကောင်များအတွက်နေရာအမြဲရှိပါတယ်။ ဖုတ်ကောင်သည်သင်၏အိမ်သို့ဝင်ရောက်လိုသည်။ နှင့်အလွန်စစ်တိုက်သောအပင်အချို့သည်၎င်းကိုကာကွယ်ရန်ဂရုစိုက်လိမ့်မည်။ အရီအိုရီရီကသိပ်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပေမယ့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းဖြစ်လာပုံကိုမိနစ်အနည်းငယ်နဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ မတူညီသောဖုတ်ကောင်အမျိုးအစားများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အပင်အမျိုးမျိုး။ ဂူဂဲလ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအနိုင်ရဂိမ်းတစ်ခု။
အပင် vs Zombies ™2အခမဲ့ဖြစ်သည်
လှပသောဗိသုကာနှင့်ပြည့်ဝသည့်စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာတစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ပါ။ သင်သည်အဖြစ်မှန်မှထွက်ခွာရာတွင်မိမိကိုယ်ကိုမရှင်းပြနိုင်သည့်ဂျီသြမေတြီဖြစ်သည်။ မင်းသမီးမင်းသမီး Ida ကိုမင်းလမ်းပြပေးရမယ်ထူးဆန်းသောလမ်းကြောင်းများ၊ အမြင်အာရုံထင်ယောင်ထင်မှားများနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များတလျှောက်။ ကျီးယောက်ျားရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားပါ။ သင့်ကိုလစျြလြူရှုမထားမည်အကြောင်းမသိသောသို့စစ်မှန်သောခရီး။ ဒီထူးဆန်းပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းလေ့လာတာကိုသင်မရပ်နိုင်ပါ။
ရေးသားသူ: ustwo ဂိမ်းများ
စျေးနှုန်း: € 2.99+
ငါတို့ရှိသမျှသည်အချိန်အတန်ကြာဂန္ထဝင်ခုန်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းဂိမ်းကိုကစားခဲ့ကြပြီ။ ဒီဂိမ်းကသင်အခြားအဆင့်အထိကစားနိုင်ခဲ့မည်သည့်စက်ဘီးဂိမ်းချီးမြှင့်။ အချို့နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဂရပ်ဖစ်, ဒီဂိမ်း breakneck မြန်နှုန်းနှင့်မတားဆီးအရေးယူကတိပေးထားတယ်။ လှည့်ကွက်လေ့လာပါနှင့်မြင်းစီးသူရဲအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ။ Gameplay နှင့်ဂရပ်ဖစ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဤကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုကိုကမ်းလှမ်းရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြသည်။
ပြိုင်ပွဲချစ်သူများများအတွက်စံပြဂိမ်း။ ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲအရှိဆုံးမတည်ငြိမ်သောမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်ပြေး။ ပျံသန်းပါ။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လက်တွေ့ကျသောဂရပ်ဖစ်များသည်သင့်ကိုအမြန်ဆုံး ၀ င်နိုင်ပြီးမြန်နှုန်းကိုခံစားရစေသည် အနည်းငယ်ဂိမ်းများကိုနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အဖြစ်အန္တရာယ်။ သင်၏ကားကိုအခြားသူများနှင့်ခွဲခြားရန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောခေါင်းစဉ်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်သင့်ကားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ စတင်!
ရေးသားသူ: Brownmonster လီမိတက်
စျေးနှုန်း: € 2.29
Assassin ရဲ့ Creed Identity
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းမှာ Assassin's Creed Saga ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားပါသည်။ ပြန်အချိန်အတွက်ခရီးသွားလာ Renaissance အီတလီo. သင့်ရဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုချင်းစီကိုစစ်မှန်တဲ့အသံတိတ်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူအဖြစ်ဖြည့်စွက်ပါ။ နက်နဲသောအရာတို့ကိုဖြေရှင်းပြီးကုန်ကျစရိတ်အားလုံးနှင့်သင်၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ပါ။ မင်းရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုရွေးပြီးမင်းရဲ့စတိုင်ကိုလုပ်ပါ၊
Dino ကို T-Rex
၎င်းသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအံ့အားသင့်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမတော်တဆအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Google Chrome ပျက်ကွက်ခဲ့ဖူးပါသလား။ ဒီဂိမ်းကကျွန်တော်တို့ကိုစမတ်ဖုန်းတွေဆီခေါ်သွားတယ် ကွန်ပြူတာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရှည်မှုကိုသက်သာအောင်ကူညီပေးဖို့စောင်ရန်းများနှင့်အတားအဆီးများကိုခုန်စေသောဒိုင်နိုဆော၏ဂိမ်း။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်လျှင်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ ပြicationsနာများသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲတစ်ဂိမ်း။ ရုံပြေးခုန်, နှင့်အဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှသွားပါ။
ဒါဟာလူတိုင်းကိုမေ့လျော့ရန်ဆောင်ရွက်သောပုံမှန်ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တူညီသောမြင်ကွင်းသို့မပြန်လိုသောအခါအခြားဂိမ်းတစ်ခုမှမသွားနိုင်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ဘောလုံးပွဲတစ်ခုမှာရိုက်နှက်ခံရတဲ့အခါ။ အခြားအရာအားလုံးကိုသင်၏စိတ်ထဲမှဖယ်ထုတ်ပြီးကဒ်များကိုသာအာရုံစိုက်ပါ။ Solitaire သည်ကောင်းသောအချိန်အတွက်ကစားရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.
ရေးသားသူ: ME2ZEN မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ
"တိုက်ပွဲတွေ" ၏ဂိမ်းတစ်ခုဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မီဒီယာနပန်းအများဆုံးအကျော်ကြားဆုံးဇာတ်ကောင်အချို့နှင့်အတူလက်စွပ်သို့ရ။ မင်းရဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကမ္ဘာကကြယ်တစ်လုံးကိုဖန်တီးပါ။ တိုက်ခိုက်ရေးနှင့်တိုက်ခိုက်မှုပုံစံကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျတူညီသောအတိုင်းအတာအတွက်ပေးနှင့်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်သည့်အလွန်ပျော်စရာဂိမ်း။ WWE မိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခုတည်းသောတရားဝင်.
အသက် ၂ နှစ်မှ ၅ နှစ်ကြားကလေးများအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်းများ
အိမ်ထဲမှကလေးငယ်များသည်နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများပိုင်ရှင်ဖြစ်လာသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့အတွက်သင့်တော်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကမ်းလှမ်းတာထက်မက။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းကနေကမ်းလှမ်းပါတယ် အမြင်အာရုံ၊ ယုတ္တိဗေဒ၊ အာရုံစူးစိုက်မှု (သို့) မှတ်ဉာဏ်စသည်တို့ကဲ့သို့သောစွမ်းရည်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကူညီပေးမည့်ပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်းများ။ အိမ်တွင်ကလေးငယ်များရှိသူများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာသံသယမရှိဘဲ။
Bimi Boo မူကြိုအားကစားပြိုင်ပွဲ
ရေးသားသူ: Bimi Boo Kids သင်ယူမှုဂိမ်းများ
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖျော်ဖြေမှုကိုသင်လောင်းလိုပါကလုံခြုံသောလောင်းကစားတစ်ခု။ သင်၏ကံကြမ္မာနှင့်သင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်စီမံပါ။ ထောင်ထဲရောက်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ နာမည်အကြီးဆုံးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဂိမ်းသည်သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ရှိသည်။ မင်းရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပြီးသင့်အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့သင်ထင်တဲ့အဆင့်ကိုရယူပါ။
ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၏စစ်မှန်သောဒိုင်နိုဆော။ ဂန္အကြားဂန္ထဝင်။ ၎င်းသည်သမိုင်းအတွက်သာသင့်စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိဂိမ်းများကြားကွာဟမှုကိုခံထိုက်သည်။ သင့်အပေါ်ကျသွားတဲ့အပိုင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ fit။ ထို့အပြင်ဂိမ်းသည်ကြာရှည်။ ကြာရှည်ရန်အတွက်အလွန်အကျွံစုဆောင်းရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ Tetris ကိုတက်နိုင်သလား?
Tetris® 2011 ခုနှစ်
Simulator ဂိမ်းထဲမှာတစ်ခုခုပြောင်းနေပြီ။ သူများသည်ဖန်စီပျံသန်းသော Simulator မြားကိုမသယ်ဆောင်တော့ပါ။ ယခုအခါ၎င်းသည်ကြီးမားသောစက်ယန္တရားများနှင့်စိုက်ပျိုးရေးရိန်းများတို့၏အောင်ပွဲခံနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ထယ်, မျိုးစေ့ကိုကြဲ, စိုက်ပျိုး, စုဆောင်း။ ဤစက်များကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရန်နှင့်လယ်ယာမြေပေါ်တွင်သင်၏အလုပ်ကိုလုပ်ရန်အရာခပ်သိမ်းအလုပ်လုပ်သည်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုး Simulator 18
Great Theft Auto: ဒုစီးတီး
၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကိုပြန်သွားပါ။ မင်းခြေထောက်မှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကမင်းလုပ်ချင်တာလုပ်နိုင်တယ်။ မင်းကမကောင်းဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းလည်းငွေပေးနိုင်တယ်။ သင်၏တာဝန်များကိုပြီးအောင်လုပ်ပြီးယုံကြည်မှုနှင့်လေးစားမှုကိုရယူပါ။ စုရုံးနေထိုင်ရာ၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝသောရပ်ကွက်များ၊ ကမ်းခြေများသို့မဟုတ်ပန်းခြံများ၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင့်ဥပဒေကိုပြဌာန်းရန်ကောင်းသည်။ Great Theft Auto သည်အခြားဂိမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
Grand Theft Auto: ဒုစီးတီး
ရေးသားသူ: Rockstar Games က
အနည်းငယ်ရွေးရန် ပို၍ ခက်ခဲလာသည်။ ဂိမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ အရမ်းတော်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကနမူနာသေးသေးလေးတစ်ခုပဲ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးအချို့ကိုချန်လှပ်ထားခဲ့ပြီးပြီ၊ မည်သည့်နေရာတွင်သင်ပျောက်နေသည်ဟုသင်ထင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပြီးအနာဂတ်ပြုစုရေးတွင်၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ကစားပါ၊ ကစားပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » ထိပ်တန်း 25 ဂိမ်းများကို 2017
Essential Phone သည်ယူနစ် ၅၀၀၀၀ ကိုရောင်းနိုင်ခဲ့သည်
Android Oreo ကို Galaxy S8 တွင်ဇန်နဝါရီလတွင်လာမည်